Labo Bilood kadib, Boqor Buur-madow oo xabsiga laga sii daayey
HARGEYSA, Somaliland - Boqor Cismaan Aw Maxamuud [Buur-madow], ayaa waxaa laga sii daayey maanta oo Arbaco ah Xabsi ku yaala Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland, kadib 60 cisho oo uu u xirnaa maamulka Muuse Biixi, sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta.
Buurmadow ayaa waxaa laga xiray 20-ka bishii Abriil ee sanadkaan Hoteel ku yaala bartamaha Hargeysa xili habeen ah, isagoona markii uu habeeno ku qaatay Saldhiga Booliska lasoo taagay Maxkamad, taasoo Saddex sano ku xukuntay.
Sida ay laga soo xigtay illo xog ogaal ah, sii dayntiisa maanta waxay ku timid kadib markii dadaalo kala duwan ay sameeyeen Odayaasha dhaqanka ee Somaliland, kuwaasoo cafis u weydiiyay Madaxweyne Muuse Biixi.
Inkasta oo si dhab ah loo shaacin inuu Madaxweynaha cafiyay, hadana Garowe Online, wuxuu fahansan yahay in sii dayntiisa ay kaalin fir-fircoon ka qaateen Odayaasha dhaqanka, iyo masuuliyiinta ay isku beesha yihiin.
Kolkii hore, Boqor Buur-madow ayaa sababta loo xiray, loona xukumay waxay ahayd inuu ku kacayo ficilo kasoo horjeeda jiritaanka Somaliland, sida laga soo xigtay nuqul kamid ah eedaynta xeer-beegtadda.
Sidoo kale, sababaha ugu wayn ee loo xukumay waxaa lagu sheegay inay tahay inuu ka qeybgalay caleema saarka Oday dhaqameed reer Puntland, taasoo ka dhacay deegaanka Carmo ee gobolka Bari horaantii sanadkan.
Hay'addaha Xuquul Insaanka u dooda ayaa Somaliland ku eedeeyay inay caburiso xuriyadda hadalka, kadib markii ay xabsiga dhigtay dad badan, oo Wariye-yaal, Abwaanno, Hal-abuurro iyo Fanaaniin soo bandhigay fekerkooda midnimada Soomaaliya.
Talaabadaan lagu soo daayey Boqor Cismaan Aw Maxamuud [Buur-madow], ayaa waxaa si diiran usoo dhaweeyay shacabka qeybihiisa kala duwan ee ku dhaqan Somaliland, kuwaasoo ku baaqay in dadka kale ee lamidka ah lasoo daayo.
Somaliland oo Xukun adag ku riday Boqor Buurmadoow
Somaliland 26.04.2018. 13:54
Wariyaal, Abwaanno iyo shaqsiyaad kaloo caan ah ayaa horey loogu xiray Hargeysa kadib markii...
Gen. Muxiyadiin "Waa Riyo in la igu dhaawacay Dagaalkii Tukaraq"
Puntland 29.05.2018. 10:54
Khilaaf ka taagan Qorshaha Deeqaha looga jarayo Somaliland
Soomaliya 25.06.2018. 10:39
Xoolo laga dhoofiyay Somaliland oo ku xanibban Sacuudiga
Somaliland 13.07.2019. 19:07
Muuse Biixi oo ka hadlay go’aankii dowlada Soomaaliya ee Guinea
Somaliland 07.07.2019. 20:51
Dagaalkii Tukaraq kadib, waa sidee hadda xaaladdu?
Puntland 31.05.2018. 16:01
Feysal: Dhex-dhexaadintii Mareykanka ee Colaadda Tukaraq waa la jebiyay
Somaliland 25.05.2018. 03:44
Muuse Biixi oo eedeeyay DFS isagoo inkirsan jiritaanka Puntland [Daawo]
Puntland 26.05.2018. 19:01
Safiirka Soomaaliya ee Mareykanka oo sanad kadib la magacaabay 16.07.2019. 18:09
Ra'iisul Wasaaraha Canada oo dhaliilay hadaladii nacaybka ee Trump 16.07.2019. 15:33
Qarax ka dhex dhacay xarun isgaarsiin oo ku taala Muqdisho 16.07.2019. 14:51
Kenya oo sheegtay in ay dishay saddex ka tirsanaa Al-Shabaab 16.07.2019. 13:22
Bilad sanadleh ah laguna maamusayo Hodan Nalayeh oo la bixinayo 16.07.2019. 12:16
Hotel Cascasey: Kharashka lagu dhisay iyo khasaaraha soo gaarey 16.07.2019. 11:26